Owesifazane waboHlanga uqokelwe kwesiphezulu – Bayede News
Owesifazane waboHlanga uqokelwe kwesiphezulu
USaneliswe Khuzwayo ongowaseMlazi, eThekwini ubengowokuqala wesifazane
Posted on 11 October 2019 17 October 2019 by Bayede News
USaneliswe Khuzwayo ongowaseMlazi, eThekwini ubengowokuqala wesifazane emlandweni wekhilikithi ukuqokelwa kwesokuba iCricket Service Manager. USanelisiwe uqokelwe kulesi sikhundla iBorder Cricket Union engamele ikhilikithi yesifundazwe i-Eastern Cape.
Ngaphambi kokuba le ntokazi iqokelwe kulesi sikhundla, yaziwa ngamava ayo ebenawo ekukhuliseni ikhilikithi esifundandazweni iKwaZulu- Natal, ikakhulukazi ezindaweni ezakhele iTheku. USanelisiwe ubesebenzela iKwaZulu-Natal Cricket Union (KZNC) enguMeneja weTownship and Rural Development. Eminyakeni eyishumi esebenzela iKZNC uqhamuke nezinhlelo ezahlukahlukene ukusabalelisa uthando lwekhilikithi ezinganeni zaboHlanga. Ubengumhleli womqhudelwano waminyaka yonke obizwa ngokuthi iTownship and Rural Cricket Development Tournament edlalwa amalokishi aqhamuka ezifundazweni ezintathu iKwaZulu-Natal, iWestern Cape, iNorthern Cape, iGauteng kanye ne- Eastern Cape.
Le ntokazi ihlobe nangemiklomelo emikhulu ngenxa yemisibenzi yayo, kule miklomelo kubalwa omkhulukazi ahlabana ngawo ngowezi-2017 ku-South African Sport Awards, lapho ethiwa ngokuba i-Administrator of the Year.
USaneliswe ekhuluma nelaboHlanga uthe, “ngiyacicima injabulo ngethuba engilinikwe iBorder Cricket, angikholokwa bengazisa ukuthi ngilitholile leli thuba. Njengowokuqala wesifazane ukuqokelwa kulesi sikhundla kusho ukuthi ngibhekene nenselelo yokuthi ngikwazi ukukhombisa ukuthi singabesifazane singawenza lo msebenzi ngikwazi ukuvulela nabanye besifazane amathuba kulo mkhakha.”
“Into engifunayo nebalulekile okwamanje kimina ukuthi ukuzijwayeza umphakathi ongaphansi kweBorder Cricket khona ngizozazi izindingo zawo kwezekhilikithi. Nabo into abangalilindela kimina ukuthi ngizobanika indlebe ngaso sonke isikhathi, ngibhekane nezidingo zabo. Ngizofika nezinguquko lapho zidingeka khona, ngiphinde ngiqhubeke nomsebenzi omuhle ezindaweni ezenza kahle. Inhloso enkulu ukukhuphula ikhilikithi yalendawo,” kuqhuba uSanelisiwe.
ElaboHlanga limbuza ngokusebenza kwakhe endimeni ebuswa abesilisa uthe akukaze kube into elula kodwa uyazama ukubekezela. Uqhube wathi nokusebnza isikhathi eside ekhilikithini kumenze wajwayela wabanokuzethemba.
Le ntokazi ebisesbenze iminyaka eyishumi eKZNC uthe akubanga into elula ukushiya kwazise ingeyokuzalwa esifundazweni iKwaZulu-Natal. Uthe, “Ukushiya iKZNC kube into ebuhlungu kakhulu kimina ngoba besekuzoba unyaka weshumi nanye ngisebenza nabo. Bese siwumndeni nabo bonke ebengisebenza nabo kusuka ezinganeni ebingisebenza ngazo, abaqeqeshi, abaphathi kuya kubaxhasi. Besengilala ngivuke ngicabanga izindlela esingaqhamuka nazo ukuthuthukisa ikhilikithi lezingane zasemalokishini. IKZNC ingiphathe kahle kakhulu selokhu ngaqala ukusebenza khona, bebengigqugquzela ukuthi ngenze kahle ngoba lo msebenzi engiwenzayo uguqula impilo yabantu.”
Uqhube wathi bekungesona isinqumo esilulala ukushiya iKZN ngoba okusiyo into ake ayicabanga ukuthi iyoke yenzeke. Ngesimo sokufuna ukukhula nokubona indlela abedingeka ngayo eBorder Cricket ukwazile ukugcina esithathile isinqumo sokulibangisa khona.
Ngesimo sokungabi nabesifazane abaningi abasezikhundleni eziphezulu kukhilikithi uSanelisiwe ube unxenxa abasefazane ukuba bangahlali bazidabukele kodwa bangafunda kuyena ukuthi kuyenzeka uma uzimisele.
“Kuwona wonke umuntu wesifazane ngithi nali ithuba lokuguqula izinto. Njengamanje iNingizimu Afrika yonke ikhuluma ngokuthuthukiswa kwabasifazane kodwa uma sihleli sizidabukela ubani uzothuthukiswa? Ngakho-ke ngithi asisukumeni sizibonakalise ngiyisibonelo salokhu engikushoyo. Singabesifazane siyadingeka kwezemidlalo, sinehlo elibukhali ezintweni ezibalulekile.”
Umlando weBorder Cricket
IBorder Cricket yasungulwa ngowe-1898, izinze esifundazweni i-Eastern Cape, e-East London. Ingamele ikhilikithi yakulesi sifundazwe, nokuthuthukiswa nokuhlelwa kwayo. IBorder Cricket iyingxenye yeCricket South Africa (CSA), idlala imiqhudelwano engamelwe yiCSA okuyiCSA 3 Day Challenge neCSA Provincial One Day Challenge. Iphinde ikhiqizele abadlali iqembu elikhulu iWarriors.